नारायण शर्मा | जेठ ९, २०७७ शुक्रबार | 0
सिमाना काटी परदेश आयौं
दश हण्डर खायौ, झन दुःख पायौं
फर्केर जानलाइ छैन दाम पनि
बसेर खानलाई छैन काम पनि
बिचल्लीमा परियो कसो गरौ आज
नेपाल हाम्रो प्यारो घर त्यही हो समाज...
हो, उनीहरुको प्यारो घर नेपाल हो । बाध्यताको भुमरीमा परेर यतिबेला परदेशमा पुगेका छन् उनीहरु । आफ्नो प्यारो मातृभूमि र जहान लालाबालालाई चटक्कै छाडेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने रहर त कसलाई हुन्छ होला र ? तर देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएपछि आफ्ना जहान लालाबालाको पेट पाल्नकै लागि विश्वका विभिन्न देश चहार्न बाध्य र विवश छन् लाखौंलाख नेपालीहरु । परदेशिनु उनीहरुको रहर थिएन, परिस्थितिले सिर्जना गरिदिएको बाध्यता थियो । आफ्ना जहानबालाको सुन्दर भबिष्यको सपना बोकेर परदेशका विभिन्न ठाउँहरुमा पुगी रोजगाररत रहेका ती नेपालीहरुका अगाडि अहिले फेरि नयाँ बिपत्ति आइलागेको छ । कोरोना कहरका कारण बिपत्तिको पहाड खडा भएको छ उनीहरुको अगाडि । काम गर्ने ठाउँहरु बन्द छन् । मालिक र त्यहाँका सरकारहरुले उनीहरुलाई चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो बनाइरहेका छन् । यतिबेला उनीहरुको मनले आफ्नो प्यारो जन्मभूमि झलझली सम्झिरहेको छ । त्यहाँको सरकारले पनि ती परदेशी नेपालीहरुलाई उनीहरुकै देशमा धपाउन खोजिरहेको छ । तर फर्केर आफ्नो मातृभूमि आउन उनीहरुसङ्ग दाम छैन । यता आउने सारा बाटाहरु पनि बन्द गरिएका छन् । लाखौंलाखको संख्यामा रहेका उनीहरुको जीवन यतिबेला बिचल्लीमा परिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा कार्यरत रहेका तिनै परदेशी नेपालीहरुको कारुणिक ब्यथालाई समेटेर जनगायक जीवन शर्माले लकडाउनको यो अवधिमा फेरि अर्को गीतिकोसेली ल्याएका छन्– परदेशी नेपालीको एउटै आवाज... ।
दिन र रात पसिनाको धारा
सम्झना आउँछ गाउँघर सारा
हुन्न भो चौकिदार जान्छु आफनै घर
विदेशका गल्ली डुल्न हाम्लाई के को कर
परदेशी नेपालीको एउटै आवाज
संकट र बिपत्ति आइलागेका बेला आखिर आफ्नै देश नै सम्झिदोरहेछ हरेक परदेशीका मनले । दिनरात पसिनाका धारा बगाएर विदेशी भूमि सिंचित गरे पनि यो विदेशी मालिक र यहाँको सरकार संकट परेका बेला आफ्ना नहुँदा रहेछन् । अनि यस्ता मालिक र सरकारहरुको चौकिदार भएर हामी कतिन्जेल बस्ने ? अहँ, अब बस्नुहुन्न यो परदेशको ठाउँमा । अब आफ्नै जन्मभूमि जानु पर्छ म । यो विदेशी भूमिमा फेरि कहिल्यै नफर्कने गरी । शायद परदेशमा रहने हरेक नेपालीको मनले यो बेला यही सोचिरहेको छ । जनगायक शर्माले गीतमा परदेशी नेपालीको त्यही ब्यथालाई समेटेका छन् । उसो त जनगायक शर्माले यो गीतको सिर्जना आजभन्दा झण्डै २५ बर्ष अगाडि २०५१ सालतिर गरेका थिए । भारतव्यापी साँस्कृतिक यात्रामा गएका बेला त्यहाँ कार्यरत प्रवासी नेपालीहरुको अवस्था देखेर, आफ्नो देशप्रतिको उनीहरुको अगाध आस्था र विस्वासलाई देखेर उनको मनमा यो गीत जन्मिएको थियो । हो यो गीतको निर्माण त्यस्तै २०५१ सालतिर भारतब्यापी साँस्कृतिक अभियानमा गएका बेला गरिएको थियो । अहिले झन कामको सिलसिलामा नेपालीहरु विश्वका धेरै देशहरुमा छरिएका छन् । कोरोना कहरले सिर्जना गरेको यो विषम परिस्थितिमा संसारका विभिन्न देशमा छरिएका ती नेपालीहरुले नेपाल फर्कने इच्छा ब्यक्त गरिरहेका छन् । कोही नेपाल फर्कनको लागि सिमानासम्म आइपुगेका छन् त कोही विदेशमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । ती सबैको पीडा देखेर पुनः एकपटक यो गीत नेपालीहरुसमक्ष पुराउन कोसिस गरिएको हो ।
जनगायक शर्मा भन्छन् ‘हामीलाई विश्वास छ, यो गीतले सारा नेपालीहरुको मनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्नेछ ।’ गीतमा परदेशी नेपालीको कारुणिक ब्यथाको चित्रण मात्र होइन, त्यसको समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र पनि देखाइएको छ ।
कारगिलको हिउँ अरबको खाडी
कहिले हामी भोकै प्यासै जङ्गल झाडी
हिड भो हर्के भाइ फर्कौं आफ्नै घर
विदेशीको सेवा गर्न हाम्लाई के को कर
परदेशी नेपाली हो हिम्मत बोकी आऊ
हाम्रो प्यारो देश बचाउन नेपालमै जाउ
यसरी आफ्नै देशमा फर्किएर मातृभूमि रक्षाको अभियान, आफूलाई परदेशिन बाध्य पार्ने यहाँको नीति र थिति बदल्ने अभियानमा सरिक हुन ती परदेशी नेपालीहरुलाई गीतमा आव्हान गरिएको छ । कतिन्जेलसम्म विदेशका गल्लीहरुमा जीवन गुजार्ने ? अब आफ्नै देशमा फर्कनु पर्छ । आफ्नो पसिनाले आफ्नै देशको भूमि सिंचाई गर्नु पर्छ । आफ्नै देशलाई हराभरा पार्नु पर्छ । हामीलाई परदेशिन बाध्य पार्ने देशको थिति बदल्ने काममा लाग्नुपर्छ अब । गीतले परदेशी नेपालीहरुको मनमा सल्बलाइरहेको त्यही भावनालाइ समेटेको छ ।
जनगायक जीवन शर्माकै शब्द, सङ्गीत र स्वर रहेको यो गीत पुनः जनसमक्ष आउँदा शर्माकै युटुब च्यानलबाट आएको छ । लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै शर्माको आफ्नै कोठाभित्र बडो सरल तरिकाले यसलाई छायांकन गरिएको छ । पलेटी कसेर भुइँमा बस्दै आफैले हार्मोनियम बजाएर शर्माले यो गीत गाएका छन् । जनगायिका निलिमा पुनले मादल बजाएर साथ दिएकी छिन् । सामान्य मोबाइलको क्यामराबाट अनु आचार्यले यसलाई छायांकन गरेकी छिन् । यसरी परदेशी नेपालीहरुको मर्मस्पर्शी भावना समेटिएको समसामयिक गीत पुन जनसमक्ष आइपुगेको छ । गीतभित्र परदेशी नेपालीका यथार्थ कारुणिक बेदनाहरु समेटिएका छन् । प्रत्येक प्रवासी नेपालीले गीतमा आफ्नो बेदना भेट्न सक्छ । श्रमजीवी जनताको मुक्ति अभियानलाई नै आफ्नो जीवनको उद्देश्य बनाएर जनसंगीतको यात्रा अघि बढाइरहेका जनगायक जीवन शर्माले आगामी दिनमा पनि यस्तै समसामयिक सिर्जनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै जाऊन् ।
लकडाउनको यो पट्यारलाग्दो अवस्थामा जीवन र परिवर्तनप्रतिको आशा र विश्वास जनतामा जगाइराख्नका लागि उनका गीतहरुले ठूलो मद्दत पुराउँदै आएका छन् । आशा गरौं, आगामी दिनमा पनि उनले जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि त्यसलाई सामना गरेर अघि बढ्न जनतामा उत्साह जगाउने खालका यस्तै ऊर्जाशील गीतहरु दिँदै जानेछन् । उनको जनगीतियात्राले सफलताको शिखर चुम्दै जाओस– हाम्रो हार्दिक शुभकामना । आउनुहोस् हामी पनि अहिलेलाई परदेशी नेपालीहरुको कारुणिक ब्यथा समेटिएको जनगायक शर्माको यही गीत सुनौं, गीतभित्र अन्तरनिहित भावनाहरुलाई आत्मसात गरौं । र, विश्वका बिभिन्न देशहरुमा अलपत्र पारिएका प्रवासी नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याएर उचित ब्यवस्थापन मिलाउन आवाज उठाऔं ।